Asa tsy andoavam-bola: Espaina no tsara indrindra ary Etazonia no ratsy indrindra
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Asa tsy andoavam-bola: Espaina no tsara indrindra ary Etazonia no ratsy indrindra » Page 3
Firenena ratsy indrindra amin'ny fialan-tsasatra karama
1. Etazonia Etazonia - tsy andro
Na eo aza ny harinkarena mandroso, i Amerika dia iray amin'ireo firenena vitsy izay tsy manome toky ny mpiasan'izy ireo amin'ny fotoana karama mangatsiatsiaka. Na dia maro aza ny mpampiasa no manome ny mpiasan'ny sasany karama fialantsasatra, tsy misy lalàna manokana mamaritra fotoana farafahakeliny farafahakeliny fialan-tsasatra tokony ananan'ny mpiasa. Noho io antony io dia heverina fa hatramin'ny ampahefatry ny amerikanina dia tsy mahazo fotoana karama, izay tena tsy rariny.
2. Kanada - 19 andro
Ny fahazoana fototra dia 10 andro fialantsasatra karama, miaraka amin'ny fialantsasatra sivy izay aloa ihany koa. Aorian'ny dimy taona misesy miaraka amin'ilay mpampiasa iray ihany dia mitombo ny fialan-tsasatra ho telo herinandro fialan-tsasatra ary avy eo aorian'ny 10 taona, ny mpiasa miasa any Canada dia manan-draharaha mandritra ny efatra herinandro tsy miankina. Toa mandoa ny tsy fivadihan'ny mpiasa any Canada!
3. Soisa - 24 andro
Ny mpiasa any Suisse dia afaka manantena fialantsasatra ho an'ny daholobe efatra, miaraka amin'ny fialan-tsasatra 20 andro fanaony isan-taona. Ny orinasa Soisa sasany dia manolotra herinandro fialan-tsasatra fanampiny ho an'ny mpiasa efa niasa tamina orinasa nandritra ny taona maro.
4. Japon - 25 andro
Ny ankamaroan'ny mpampiasa any Japon dia mandoa ny mpiasa amin'ny fotoanany mandritra ny fialantsasatra 15 fanao mandritra ny taona. Ho fanampin'izay, ny mpiasa dia mahazo antoka ny 10 andro tsy andoavany vakansy isan-taona. Any amin'ny toeram-piasana Japoney sasany, ny mpiasa iray dia tsy handray ny fahafenoany isan-taona, satria matahotra izy ireo fa handiso fanantenana na hanelingelina ireo mpiara-miasa aminy. Ny fahanteran'ny orinasa koa dia mandray anjara amin'ny fotoana fialan-tsasatra karama, ny mpiasa indraindray mahazo andro tsy fiasana karama hafa, isan-taona asa, hatramin'ny 20 andro farafahakeliny isan-taona.